Datacenter Networks - Part 1 - BIM Trainings
Dec 6, 2015 | Posted by	admin | Uncategorized	|
ဒီနေ့တော့ Datacenter Network အကြောင်းနည်းနည်း ပြောရအောင်. အရင်ဆုံး Datacenter Network ဆိုတာဘာလည်း ၊ ပုံမှန်သုံးနေကျ Network တွေနဲ့ဘာကွာလည်း ကြည့်ရအောင်။ Datacenter Network ဆိုတာ Datacenter ထဲမှာ အသုံးပြူတဲ့ Compute ၊ Application ၊ Storage ၊ Security Node နဲ့ Service Component တွေကို အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Datacenter Network တွေရှိတာကြာပြီဆိုပေမဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက Network Engineer တွေအတွက် Datacenter Network တွေနဲ့သိပ်မရင်းနှီး ခဲ့ပါဘူး။ အဓိက အကြောင်းအရင်းကတော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ Business တွေက Information Technology (IT) ကို အကုန်အကျများတဲ့ Cost Center တစ်ခုအဖြစ် သဘောထားခဲ့ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Competitive Market သိပ်မရှိတော့ IT ကို Business Enabler အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာ တော်တော်ကိုနည်းခဲ့ပါတယ်။ Business Competition များတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာကြတော့ အများထက်သာအောင် ၊ အချိန်တိုတိုနဲ့ အလုပ်ပြီးအောင် ၊ အမှားနည်းအောင် ၊ Customer Experience ကောင်းအောင် စသည်ဖြင့် Application တွေ Services တွေကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးခဲ့ကျပါတယ်။ အဲဒီလို Application တွေ Service တွေ အားလုံးကို Run ထားဖို့ Datacenter တွေလိုပါတယ်။ နောက် Datacenter Network တွေနဲ့မရင်းနှီးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုက Datacenter Network တွေဟာ Network Engineer အများစုလေ့လာခဲ့တဲ့ Network တွေနဲ့ တော်တော်ကွာခြားပါတယ်။ Datacenter Network တွေအတွက်လိုအပ်ချက်က Normal Network တွေနဲ့ သိပ်မတူပါဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ ကျနော်တို့ဆီမှာ လည်း Datacenter တွေ ရှိလာပါပြီ။ Datacenter Network နဲ့ ပတ်သက် တဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေးတွေ လည်းရှိလာပါပြီ။ ဒါကြောင့်လည်း DC အတန်းကိုဖွင့်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
Datacenter Network နဲ့ Normal Network တွေနဲ့ ဘာတွေကွာလည်း ကြည့်ရအောင်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ် ၆ နှစ် အထိ Network Engineer အများစု ဟာ Datacenter Network တွေ ကို သူတို့ရင်းနှီးတဲ့ Three-Tier Architecture Network Design ကို Reference လုပ်ပြီး Design လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Core , Distribution, Access စသည်ဖြင့်ပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုး Datacenter Network တွေကို Traditional Datacenter Network လို့ခေါ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ Virtualization Techonlogy တွေကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုထားတဲ့ Next-Generation Datacenter Network တွေကိုသုံးလာကျပါတယ်။ Traditional Datacenter Network တွေအကြောင်းစပြီးကြည့်ရအောင်။ Next-Generation Datacenter Network တွေအကြောင်းတော့ နောက် Post တစ်ခုမှဆက်ရေးပမယ်။
Normal Network (NN) – End User LAN
Datacenter Network (DN) – Server Farm ၊ Datacenter
NN – Single-Homed
DN – Single-Homed ၊ Multi-Homed
NN – 100/1000 Mbps
DN – 1/10 Gbps
NN – Port Channels with 1/10G links
DN – Port Channels with 10/40/100G links
NN – Policy control and Layer3gateway
DN – Policy control and Layer3gateway + connectivity to network service appliances such as load balancers and firewalls.
NN – South-north
DN – Mix of south-north and east-west
NN – Minimum : affectagroup of users
DN – Critical :afew minutes of downtime can cost hundreds of thousands of dollars.
ဒီနေရာမှာ South-North Traffic ဆိုတာ Access Layer က Host တစ်ခုက Distribution ဒါမှမဟုတ် Core Layer ကိုဖြတ်သွားပြီး တခြားတစ်နေရာက Host / Server တစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ Traffic အမျိုးအစားကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ East-West Traffic ဆိုတာကတော့ Access Layer က Host တစ်ခုက တခြား Access Layer က Host/Server တစ်ခုကို ဆက်သွယ်တဲ့ Traffic အမျိုးအစားကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်အရက်မှ Next-Generation Datacenter Network တွေအကြောင်းဆက်ရေးပါမယ်။
ဒီနတေ့ော့ Datacenter Network အကွောငျးနညျးနညျး ပွောရအောငျ. အရငျဆုံး Datacenter Network ဆိုတာဘာလညျး ၊ ပုံမှနျသုံးနကြေ Network တှနေဲ့ဘာကှာလညျး ကွညျ့ရအောငျ။ Datacenter Network ဆိုတာ Datacenter ထဲမှာ အသုံးပွူတဲ့ Compute ၊ Application ၊ Storage ၊ Security Node နဲ့ Service Component တှကေို အခငျြးခငျြး ခြိတျဆကျပေးနိုငျဖို့ ဖွဈပါတယျ။ Datacenter Network တှရှေိတာကွာပွီဆိုပမေဲ့ ကနြျောတို့ မွနျမာနိုငျငံက Network Engineer တှအေတှကျ Datacenter Network တှနေဲ့သိပျမရငျးနှီး ခဲ့ပါဘူး။ အဓိက အကွောငျးအရငျးကတော့ ကနြျောတို့ နိုငျငံမှာ Business တှကေ Information Technology (IT) ကို အကုနျအကမြားတဲ့ Cost Center တဈခုအဖွဈ သဘောထားခဲ့ကွလို့ပဲဖွဈပါတယျ။ Competitive Market သိပျမရှိတော့ IT ကို Business Enabler အဖွဈအသုံးပွုခဲ့တာ တျောတျောကိုနညျးခဲ့ပါတယျ။ Business Competition မြားတဲ့ နိုငျငံတှမှောကွတော့ အမြားထကျသာအောငျ ၊ အခြိနျတိုတိုနဲ့ အလုပျပွီးအောငျ ၊ အမှားနညျးအောငျ ၊ Customer Experience ကောငျးအောငျ စသညျဖွငျ့ Application တှေ Services တှကေို တှငျတှငျကယျြကယျြ သုံးခဲ့ကပြါတယျ။ အဲဒီလို Application တှေ Service တှေ အားလုံးကို Run ထားဖို့ Datacenter တှလေိုပါတယျ။ နောကျ Datacenter Network တှနေဲ့မရငျးနှီးတဲ့အကွောငျးတဈခုက Datacenter Network တှဟော Network Engineer အမြားစုလလေ့ာခဲ့တဲ့ Network တှနေဲ့ တျောတျောကှာခွားပါတယျ။ Datacenter Network တှအေတှကျလိုအပျခကျြက Normal Network တှနေဲ့ သိပျမတူပါဘူး။ အခုနောကျပိုငျးတော့ ကနြျောတို့ဆီမှာ လညျး Datacenter တှေ ရှိလာပါပွီ။ Datacenter Network နဲ့ ပတျသကျ တဲ့အလုပျအကိုငျအခှငျ့အရေးတှေ လညျးရှိလာပါပွီ။ ဒါကွောငျ့လညျး DC အတနျးကိုဖှငျ့ဖွဈသှားတာဖွဈပါတယျ။
Datacenter Network နဲ့ Normal Network တှနေဲ့ ဘာတှကှောလညျး ကွညျ့ရအောငျ။ လှနျခဲ့တဲ့ ၅ နှဈ ၆ နှဈ အထိ Network Engineer အမြားစု ဟာ Datacenter Network တှေ ကို သူတို့ရငျးနှီးတဲ့ Three-Tier Architecture Network Design ကို Reference လုပျပွီး Design လုပျခဲ့ပါတယျ။ Core , Distribution, Access စသညျဖွငျ့ပေါ့။ အဲဒီလိုမြိုး Datacenter Network တှကေို Traditional Datacenter Network လို့ချေါပါတယျ။ အခုနောကျပိုငျးတော့ Virtualization Techonlogy တှကေို တှငျတှငျကယျြကယျြ အသုံးပွုထားတဲ့ Next-Generation Datacenter Network တှကေိုသုံးလာကပြါတယျ။ Traditional Datacenter Network တှအေကွောငျးစပွီးကွညျ့ရအောငျ။ Next-Generation Datacenter Network တှအေကွောငျးတော့ နောကျ Post တဈခုမှဆကျရေးပမယျ။
ဒီနရောမှာ South-North Traffic ဆိုတာ Access Layer က Host တဈခုက Distribution ဒါမှမဟုတျ Core Layer ကိုဖွတျသှားပွီး တခွားတဈနရောက Host / Server တဈခုနဲ့ဆကျသှယျတဲ့ Traffic အမြိုးအစားကို ဆိုလိုတာဖွဈပါတယျ။ East-West Traffic ဆိုတာကတော့ Access Layer က Host တဈခုက တခွား Access Layer က Host/Server တဈခုကို ဆကျသှယျတဲ့ Traffic အမြိုးအစားကိုပွောတာဖွဈပါတယျ။
နောကျအရကျမှ Next-Generation Datacenter Network တှအေကွောငျးဆကျရေးပါမယျ။